बीबीसीले लेख्यो भारतकै यो कदमका कारण नेपाललाई आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सहज « Janaboli
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ज्वाइँ नै बिचौलिया ! अर्बौ रकम यसरी कुम्ल्याए
अशोकशरण अधिकारी, काठमाडौं । नयाँ बजेट घोषणासँगै भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जोडिएका समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि चुलिएको ओली राष्ट्रवाद
सगरमाथामाथी चीनले किन विमान उडाइरहेको छ ?
काठमाडौ । नेपाली आकाशमा अहिले चिनियाँ विमान फाट्टफुट्ट उडेको देख्न सकिन्छ। तर, ती व्यावसायिक वा
काठमाडौँ । यतिबेला आम मानिसबीच कोरोना भाइरसबाहेक अर्को एउटा जैविक जीव सलहको चर्चा निकै छ